Football Khabar » कीर्तिमानी मूल्यमा डिबाला भित्र्याउन टोटनह्याम सक्रिय : कति तिर्दैछ ?
कीर्तिमानी मूल्यमा डिबाला भित्र्याउन टोटनह्याम सक्रिय : कति तिर्दैछ ?
इंग्लिस क्लब टोटनह्याम अर्जेन्टिनी फरवार्ड पाउलो डिबाला अनुबन्ध गर्न सक्रिय भएको छ । उसले इटालियन क्लब युभेन्टसका २५ वर्षीय युवा फरवार्डलाई इंग्ल्यान्ड उतार्न क्लबको इतिहासकै सर्वाधिक महँगो मूल्य अफर गर्ने तयारी गरेको छ ।
इंग्लिस मिडियाका अनुसार टोटनह्यामले डिबालाका लागि युभेन्टससँग ८० मिलियन पाउन्डको अफर गर्ने भएको छ । यदि युभेन्टसले सो अफर स्वीकारे डिबाला टोटनह्यामको इतिहासमै सर्वाधिक महँगा खरिद खेलाडी हुनेछन् । यसअघि टोटनह्यामले सबैभन्दा बढी ५५ मिलियन पाउन्ड मात्रै खर्चिएको छ ।
पछिल्लो समय युभेन्टसमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएपछि भूमिका काटिएका डिबाला पहिलो रोजाइमा पर्न सकिरहेका छैनन् । हालै अएका नयाँ प्रशिक्षक सार्रीको नेतृत्वमा पनि डिबालाले पर्याप्त समय पाउनेमा आशंका छ ।
विगत सिजनमा पर्याप्त गोल गर्दै आएका उनले गत सिजन निकै न्यून मात्रै गोल गरे । धेरैले उनी रोनाल्डोको छायाँमा परेको बताउँछन् । तर, केही समयअघि पनि डिबाला स्वयंले आफू युभेन्टसमा खुसी रहेको बताउँदै क्लब नछाड्ने बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति ९ श्रावण २०७६, बिहीबार ०९:५९